Dnepr (Dnipropetrovsk) - omunye idolobha elikhulu kunawo wonke lezimboni Ukraine
Umuzi Dnipro (zangaphambili Dnipropetrovsk) noma Dnepr (Russian) ikhona eMfuleni Dnieper (Dnepr noma Dnipro) e East-Central Ukraine , futhi inabantu abangaphezu 1 million (idolobha lesithathu kuleli lizwe by labantu).
Large futhi emuhle, kuba umuzi omkhulu East-Central Ukraine.
Dnipro yidolobha ashukumisayo futhi ephapheme.
Umuzi oluhlaza ayamangalisa kanye ebanzi futhi ezihamba kancane Dnieper emfuleni (Dnepr in Russian, Dnipro in Ukrainian) futhi ine embankments ephawulekayo, boulevards eside namapaki nelibanzi.
Futhi ezinkulu isikhungo ephezulu ubuchwepheshe ezimbonini, imfundo, Umshini wokwakha-, yokusansimbi futhi ukuhweba. Umuzi akuyona nje idume umkhakha yayo commercial, kodwa futhi amagquma ayo eluhlaza kanye nomlando ejulile.
The old inqaba zokuhlala belilokhu likhona kusukela maphakathi nekhulu le-16. Leli dolobha elisha yasungulwa ngo 1776 INkosi Russian, Potemkin ngomyalo uCatherine II, Empress of the Empire Russian futhi wabizwa ngokuthi Yekaterinoslav (Ekaterinoslav) kusukela 1776 ukuze 1926. Phakathi 1918 Igama edolobheni kwakungu Sicheslav (Inkazimulo Sich '/ Inqaba Cossacks).
Dnipro (Dnipropetrovsk) ubelokhu isikhungo enkulu embonini ensimbi kusukela ekuqaleni kwekhulu lama-20 kuze kube lamanje. Iphinde uye wabusa e-machinebuilding kanye Aero-spacebuilding umkhakha kusukela ngawo-1950.
Isibuyekezo sokugcina:23 May 19